သန်လျင်မြို့မှထူးခြားဖြစ်စဉ် တရားခံမှာ အဘွားအိုတဦး ဖြစ်ကြောင်းသိရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သန်လျင်မြို့မှထူးခြားဖြစ်စဉ် တရားခံမှာ အဘွားအိုတဦး ဖြစ်ကြောင်းသိရ
သန်လျင်မြို့မှထူးခြားဖြစ်စဉ် တရားခံမှာ အဘွားအိုတဦး ဖြစ်ကြောင်းသိရ
Posted by mickylay on Apr 22, 2010 in Myanma News, News |7comments
စီစီတီဗီ နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးချက် အရ တရားခံမှာ အဘွားအို တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်..
နေကြပြီး ယောက်ကျား သေဆုံးသွားသော အခါ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့
လတ်ဆတ်သော လူသေများကိုသာ ဓါးနှင့် လှီးဖြတ်ကာ စားသုံးနေသည်ဟု သိရှိရပါသည်..
ရောဂါနှင့် သေသော လူသေများကို မစားသောက်ပဲ..လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သေသော လူသေများကိုသာ
ယခုပေါ်ပေါက် လာရခြင်းမှာ ဓါးထိုးခံသေသွားရသော လူငယ်တစ်ယောက်ကို အသားကိုလှီးဖြတ် ထားပြီး..နောက်နေ့လူသေအလောင်းပြင်ဆင်သောအခါ..သေသေချာချာ…ဓါးဖြင့်လှီးဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရာမှ အလောင်းရှင်မှ တရားစွဲဆို ခြင်းကြောင့် အမှုပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်..
ထိုကိစ္စ သည်..ထို ဝိဥာဉ်မှ အဖွားအိုကို ဝင်ရောက် ပူးဝင်ပြီး စားသောက်နေရပါသည်ဟု..ဘုန်းကြီးတပါးရှေ့မှာ ဝန်ခံဖြောင့်ချက်ပေးပါသည်…
သို့ပါသော်လည်း….ဥပဒေ တွင် မည်သို့မျှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိသောကြောင့် အဖွားအို အား ဆက်လက်ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်…
သန်လျင်မြို့မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောင့်လူတော်တော်များများစိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်..။ဖြစ်ပွားပုံမှာ..သန်လျင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိ ရင်ခွဲထောင်တွင်ထားသော ရုပ်အလောင်းများမှာ ထူးခြားဆန်းကြယ်စွာဖြင့် လက်များ၊ပေါင်များတွင် ကုတ်ဖဲ့စားသောက်ထားသည့် အနေအထားမျိုးဖြင့် ပျက်စီးနေသည်မှာ ယခုသတင်းရရှိသော အချိန်အထိ အလောင်း (၁၈)လောင်းခန့်ထိုသို့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။
၄.၄.၂၀၁၀ နေ့ညတွင်လည်း အလောင်းနှစ်လောင်းကိုထားရှိရာ၊တစ်လောင်းမှာ နားရွက် တစ်ဖက် ပျက်စီးလျှက်ရှိပြီး.၊နောက်တစ်လောင်းမှာပေါင်သားများပျက်စီးလျှက်ရှိနေပါသည်။ထိုသို့ပျက်စီးသွားသောရုပ်အလောင်းများထဲမှ အချို့သော ပိုင်ရှင်များမှ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်သူများအား တရားစွဲဆိုထားကြောင်းကိုလည်း ကြားသိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ၅.၄.၂၀၁၀ နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းအဆင့်ရှိ တာဝန်ရှိ သူများမှသန်လျင်ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ရှိလာပြီး မြို့နယ် တာဝန်ခံများကို ယခုအမှုအားအမြန်ဖော်ထုတ်ပေးရန် ဆူပူကျိန်းမောင်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု မျက်မြင် တစ်ဦးကပြောပြပါသည်။
ထိုညတွင် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ညပိုင်းတွင်အထူးဂရုစိုက်စောင့်ကြပ်နေပါသော်လည်း ၅.၄.၂၀၁၀ ညတွင်လည်း အလားတူအဖြစ်အပျက် ထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်ကြောင်း မြို့ခံများမှ တဆင့် သိရပါသည်။
ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များအတွက် မြို့ခံများအနေဖြင့် သို့လောသို့လော ထင်မြင်ချက်မျိုးစုံဖြင့် လူများအကြား ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ တစ်ခုအဖြစ် လူပြောများလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း….forward mail က ရလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။….
Admin ကသတိပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေပါ။
mandalaygazatteရဲ့ တန်ဖိုးကိုကျစေမယ့် ပိုစ်တွေမမြင်လိုပါ။
yadanar chit ko says:
hote per tal..ma tin think per ..
ဘယ်လောက်ပဲ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းအုန်းတော့… ဒီလောက်ထိတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်…
ကောလဟလ သတိထား အယုံလွယ်ကခက်မယ်ဗျား….
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ကောလဟာကလွင့်တာထင်တာပဲ ။
It’s impossible because there are my old neighbors near this Than Lynn Hospital . They told me that this case is true but this old lady was not the victim . This old lady is justadead-body-cleaner. She drinkalittle when she begin washing the body . It is needed for her because bathingadead body isascary thing. But she will never do eatingadead meat . It’s sure . Because I knowalittle this woman . But I’ll never tell her name .
The only thing I want to say is this old lady didn’t eat any meat . This is justaGOSSIP !.